खेल संगै प्रसंशकको मन पनि जित्दै रोनाल्डो!
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स संबाददाता September 22, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| क्रिस्टियानो रोनाल्डोको दुनिया भरमा प्रशंसकको एक विशाल साम्राज्य छ।
उनका प्रशंसकहरु उनको एक झलक को लागी मात्र पनि पागल छन्।
उनलाई भगवान मान्ने देखि लिएर आफ्नो रोल मोडलका रुपमा उतार्ने हजारौं छन्।
उनीहरुले मरिहत्ते गरे जस्तै रोनाल्डोले पनि आफ्ना प्रशंसक हरु प्रति उदारता देखाउने गरेका छन्।
फिल्डमा त सधै जादु देखाउने रोनाल्डो, आफ्नो फ्यान हरु प्रतिको सकारात्मक भावले पनि बेला बखत चर्चामा आउने गरेका छन्।
रोनाल्डो जब उनी एक मौका पाउँछन्, उनी आफ्ना फ्यानहरुलाई निराश गर्दैनन्।
यस्तै एक घटना गत साता म्यानचेस्टर युनाईटेडको ट्रेनिङ कम्प्लेक्समा घटेको छ। उनले एक युवा फ्यानमाथि गरेको ब्यबहारले थप प्रसंशक हरुको मन जितेका छन्।
यस्तो एउटा उदाहरणमा, पोर्चुगलका फरवार्ड रोनाल्डोले दिएको एउटा सानो सामिप्यताले एक युवा म्यानचेस्टर युनाइटेड प्रशंसकको मन जित्यो।
क्लबको प्रशिक्षण मैदानमा जाँदै गर्दा रोनाल्डोले एउटा जवान केटा सडकको छेउमा उभिएको देखे। क्यारिंग्टनको प्रवेशद्वारबाट धेरै टाढा एउटा कार्डबोर्ड चिन्ह सहित “रोनाल्डो कृपया तपाइँ रोक्न सक्नुहुन्छ। यसले मेरो सप्ताहन्त बनाउनेछ।‘ लिएर बसेका युवा फ्यानलाई उनले उनको जीवनको सम्भवतः ठुलो उपहार दिए।
“पाँच पटकको बालोन डी’ओर विजेता, जो आफ्नो लेम्बोर्गिनी बाट ट्रेनिङका लागि हिँडेका थिए, रोके र उक्त फ्यान लाई भेट्नको लागी तानिए। उक्त फ्यान रोनाल्डो संग एक छोटो कुराकानी आदान प्रदान गर्नु अघि द्रुत तस्वीर लिन सफल भए। यो रोनाल्डो द्वारा एक सानो पल गहिराई सम्म हृदय छुने इशारा थियो।
कहिले च्यारिटी गरेर त कहिले यस्ता स साना कुराको ख्याल गरेर रोनाल्डो आफ्ना प्रशंसकको माझ सधै किंगको उपनामले चिनिन्छन।
Posted in अन्तरष्ट्रिय फुटबल, फुटबलTagged #cristiano ronaldo #hamro nepal sports #manchester united
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| एभरेष्ट प्रिमियर लिगमा यस अघि भएको सिजनमा सबैभन्दा खराब प्रदर्शन गरेको पोखरा राइनोज यसपालि आफ्नो प्रदर्शन सुधार्ने प्रयासमा रहनेछ। सन २०१७/१८ को सिजनमा इलीमिनेटर सम्मकाे यात्रा तय गरेको थियो। कुल ६ टोलीले सहभागिता जनाएको उक्त सिजनमा चौथो स्थानमा रहँदै पोखरा राइडर्सले इलिमिनेटर को यात्रा तय गरेको […]
कसले सम्हाल्ला त बार्सिलोनाको ऐतिहासिक १० नम्बर जर्सी?
कसरी हेर्ने त युरो २०२० नेपालमा ?
च्याम्पियन्स लिग छनौट : बार्सिलोना संकटको ठुलो समाधान
रोनाल्डोले यो सिजन पछि म्यानचेस्टर युनाईटेड छाड्न सक्ने